XORRIYADDA QORSHAHA: Sii daa fikradahaaga iyo hal -abuurkaaga oo leh xorriyad aan xad lahayn. Naqshadeynta, birtu waxay bixisaa ballaarinta ballaarinta ugu weyn ee suurtogalka ah oo leh qiimayaasha walaaca ee habboon.
GAADIIDKA: Astaamaha birta aadka u caatada ah oo leh ballacyada ugu sarreeya ayaa u oggolaanaya hufnaan, abuurista goobo nololeed oo iftiin leh iyadoo la siinayo heerkulka qolka raaxada leh.
DHIBAATOOYIN: Kala -duwanaanshaha aan dhammaadka lahayn ee birta micnaheedu waa in loo adeegsan karo qaab dhismeedka dhaqanka iyo kan casriga ah - bannaanka ama gudaha dhismaha.
Naqshadeynta: Aragtida soo jiidashada leh ee birta sida maaddad ayaa suurtogal ka dhigaysa in la abuuro kala duwanaansho laga soo bilaabo qaabab xarrago leh iyo kuwo qadiimi ah ilaa kuwo casri ah oo casri ah.
XORRIYADDA QORSHAHA: Ku sii daa fikradahaaga iyo hal -abuurkaaga xorriyad aan xad lahayn oo ku dhow. Naqshadeynta, birtu waxay bixisaa ballaarinta ballaarinta ugu weyn ee suurtogalka ah oo leh qiimayaasha walaaca ee habboon.
GAADIIDKA: Noocyada birta aadka u khafiifka ah ee leh ballacyada ugu sarreeya ayaa u oggolaanaya hufnaan, abuurista goobo nololeed oo iftiin leh iyadoo la siinayo heerkulka qolka raaxada leh.